Dhalinyaro saaran tareen fariin goostay - BBC Somali
Dhalinyaro saaran tareen fariin goostay
Image caption Kooxda al-Shabaab
Madaxa hay'adda amniga gudaha ee dalka Britain, ee loo yaqaan MI5, Jonathan Evans, ayaa walwal ka muujiyay weerar ay dhici karto in kooxo ku soo tababartay Soomaaliya ay ka fuliyaan gudaha dalka Britain.
Jonathan Evans, ayaa sheegay in 'waqti' oo kaliya uu naga xigo xilliga uu weerarkaasi dhici karo.
Madaxa hay'adda Amniga gudaha Britain, wuxuu sheegay in dad badan deganaa Britain ay ka dhinac dagaalamaan kooxda al-Shabaab ee ka howlgasha gudaha dalka Soomaaliya.
"waa jiraan kuwo gudaha jooga, Soomaalida America, Europe iyo wadamo kale oo shisheeye, oo iyaguna xiriir la leh, arrintaas waa jirtaa oo cadayn ayaan u haynaa."
Maxamed Sheekh Xassan
Walwalkaas waxaa sidoo kale qaba dowladda ku meelgaarka ah ee Soomaaliya, oo sarkaal ka tirsan uu sheegay in horay ay uga digeen qatarta kooxda Islaamiga ah ee al-Shabaab in ay tahay mid ka wayn wax ku kooban dalka Soomaaliya, balse ay tahay mid u gudbi karta meelo ka baxsan xuduudaha dalka.
Generalka ugu sareeya ciidanka sirdoonka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Xassan oo BBC u waramay, isagoo jooga London, ayaa sheegay in kooxo ay ka mid yihiin dhalinyaro ka tagtay Europe ay ka dagaalamayaan Soomaaliya. "waa jiraan kuwo gudaha jooga, Soomaalida America, Europe iyo wadamo kale oo shisheeye, oo iyaguna xiriir la leh, arrintaas waa jirtaa oo cadayn ayaan u haynaa." ayuu yiri.
"Al-shabaab waxay saaran tahay tareen fariinka goostay, si looga degona ma garanayaan"
Maxamed Sheekh Xassan,
Wuxuu intaas ku daray in kooxaha ajnabiga ah ay yihiin maskaxda ka dambaysa al-Shabaab, oo ay baraan sida wax loo qarxiyo, iyagoo gacanta ku haya maamulka dhaqaalaha iyo howlgalada. Ajnabiga la jooga al-Shabaab ayuu tiradooda ku qiyaasay ilaa laba kun.
Wuxuu ku eedeeyay al-Shabaab in ay caruurta ku khasabto in ay u dagaalamaan. Iskuulada ayuu sheegay in ay khasab kaga soo kaxaystaan, isagoo intaas ku daray in ay cadayn u hayaan falkan kadib markii ay qabteen caruur 16 sano da'doodu ka yar tahay, oo ay saxaafadda u soo bandhigeen, iyagoo qiranaya in lagu qasbay fulinta howlgalada al-Shabaab.
Ajnabiga al-Shabaab la safan
General Maxamed Sheekh Xassan, ayaa sheegay in dad badan oo aan Soomaaliya u dhalan ay ka dhinac safan yihiin al-Shabaab, kuwaas oo dhinacyada kala duwan ee maamulka mas'uul ka ah.
"Nimanka ajaanibka ayaa maskaxda ka khabsaday........... Waxaan kula talinayaa walaalaheena inta Soomaalida sheeganaysa, bal in ay maskaxdooda dib uga shaqeysiiyaan, inkastoo aanan rajo badan ka qabin- qof tareen fariin ka go'ay saaran dhibkiisa waad garan kartaa." Maxamed Sheekh.